C/weli Gaas oo sheegay inuu Dubai kusoo saxiixi doonno heshiiska dekedda Boosaaso – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/weli Gaas oo sheegay inuu Dubai kusoo saxiixi doonno heshiiska dekedda Boosaaso
Wafdi ballaaran ee uu hoggaaminaayo madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta safar shaqo ugu amba-baxay dalka Isutaga Imaraadka Carabta, isagoona ka dhoofay garoonka magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal.
Madaxweyne Gaas oo daqiiqado kooban warbaahinta kula hadlay garoonka magaalada Garoowe ayaa sheegay in safarkiisa dalka Imaaraadka Carabta uu la xiriiro mashruuca casriyeynta iyo ballaarinta dekedda magaalada Boosaaso oo haatan meel gaba-gabo ah maraaya.
“Waxaan maanta u amba-baxayaa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta oo aan u aadayo heshiiskii muddo soo socday ee ahaa ballaarinta iyo casriyeynta dekedda magaalada Boosaaso, heshiiska oo muddo soo socday geba-gebadiisiina la maraayo, waxaan rajeynayaa inuu guul ku soo dhamaado” Sidaas waxaa yiri C/weli Gaas.
Dhinaca kale, madaxweyne Gaas oo sheegay in magaalada Dubai uu kusoo saxiixi doonno heshiiska mashruucani ayaa hadane tilmaamay inuu yahay mid dan u ah horumarinta iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland.
Sidoo kale, madaxweyne Gaas ayaa sheegay in heshiiskani uu wax weyn ka bedeli doonno shaqooyinka dekedda xarunta ganacsiga maamulka Puntland, isagoona sidoo kale shacabka Puntland ku booriyay inay illaashadaan xasiloonidda iyo kala dambeynta halkaasi ka jirta.
Si kastaba ha ahaatee, heshiiskaan ayaa noqonaya kii labaad oo ay shirkadda DP World la gasho maamul goboleed ka tirsan dalka Soomaaliya, waxayna shirkadaan hore heshiis muddo 25 sanno ah la gashay maamulka Somaliland, kaas oo ay kula wareegayso dekedda magaaladda Berbera.